25 सर्वश्रेष्ठ एस्केप कोठा बोर्ड खेल | मलाई फुर्सद दिनुहोस्
इसहाक | 20/12/2021 14:55 | अद्यावधिक गरियो 20/12/2021 16:06 | सामान्य
को बोर्ड खेल एस्केप कोठा तिनीहरू वास्तविक एस्केप कोठाहरूमा आधारित छन्, अर्थात्, सेटहरू वा विभिन्न विषयवस्तुहरू र कोठाहरू भएका परिदृश्यहरू जहाँ सहभागीहरूको समूहलाई बन्द गरिएको छ जसले पजलहरूको शृङ्खलाहरू समाधान गर्नुपर्दछ र खेल समाप्त हुनु अघि कोठा छोड्न सक्षम हुनका लागि संकेतहरू फेला पार्नुपर्दछ। मौसम। एक खेल जसले सहयोग, अवलोकन, सरलता, तर्क, सीप, र प्रत्येकको रणनीतिक क्षमता बढाउँछ।
यी कोठाहरूको सफलताले पनि लोकप्रिय बनाएको छ यस प्रकारको बोर्ड खेलहरू, विशेष गरी महामारी पछि, किनकि यी मध्ये धेरै कोठाहरू सुरक्षाको लागि बन्द छन्, वा प्रवेश गर्न सक्ने समूहहरूको सन्दर्भमा सीमितताहरू छन्। त्यसैले तपाईं आफ्नो घरको आरामबाट खेल्न सक्नुहुन्छ, र सम्पूर्ण परिवार वा साथीहरूसँग। त्यहाँ तिनीहरू सबै स्वाद र उमेरका लागि छन् ...
1 सबै भन्दा राम्रो एस्केप कोठा बोर्ड खेल
1.2 अपरेशन एस्केप कोठा
1.3 एस्केप रूम द गेम २
1.4 बाहिर निस्कनुहोस्: डुबेको खजाना
1.5 अनलक! वीर साहसिक
1.6 एस्केप रूम द गेम २
1.7 एस्केप कोठा खेल आतंक
1.8 एस्केप रूम द गेम २
1.11 La casa de papel - एस्केप गेम
1.12 एस्केप द रुम: वेधशाला हवेलीमा रहस्य
1.13 बाहिर निस्कनुहोस्: परित्याग गरिएको केबिन
1.14 बाहिर निस्कनुहोस्: डरलाग्दो मेला
1.15 लुकेका खेलहरू: 1st केस - Quintana de la Matanza को अपराध
1.16 बाहिर निस्कनुहोस्: ओरिएन्ट एक्सप्रेसमा मृत्यु
1.17 बाहिर निस्कनुहोस्: सिनिस्टर हवेली
1.18 बाहिर निस्कनुहोस्: रहस्यमय संग्रहालय
1.19 लुकेका खेलहरू: दोस्रो केस - स्कार्लेट डायडेम
1.20 बाहिर निस्कनुहोस्: फिरऊनको चिहान
1.21 बाहिर निस्कनुहोस्: गोप्य प्रयोगशाला
1.22 बाहिर निस्कनुहोस्: मिसिसिपीमा डकैती
1.23 एस्केप कोठा द खेल: समय यात्रा
1.24 कोठा 25
1.25 बाहिर निस्कनुहोस्: बिर्सिएको टापु
2 उत्तम एस्केप कोठा खेल कसरी छनौट गर्ने
सबै भन्दा राम्रो एस्केप कोठा बोर्ड खेलहरू मध्ये केही छन् विशेष ध्यान आकर्षित गर्ने शीर्षकहरू। अविश्वसनीय खेलहरू जसले तपाईंलाई ठूलो विवरणको साथ सेटिङमा डुबाउँछ र जहाँ तपाईंले चुनौतीहरू समाधान गर्न प्रयास गर्न आफ्नो दिमाग निचोड गर्नुपर्नेछ:
ThinkFun 76311, Exhaust...
यो खेल सम्पूर्ण परिवारको लागि हो, किनकि यो शुद्ध रमाईलो छ र 13 वर्षदेखि सबै उमेरका लागि उपयुक्त छ। यसमा तपाईंले पहेलियाँ, पजलहरू समाधान गर्नका लागि बाँकी खेलाडीहरू (8 सम्म) सँग मिलेर काम गर्नुपर्छ र डाक्टर ग्रेभलीको अँध्यारो रहस्य समाधान गर्ने प्रयास गर्नका लागि सुरागहरू फेला पार्नु पर्छ।
डा. ग्रेभलीको गोप्य किन्नुहोस्
अपरेशन एस्केप कोठा
Diset - अपरेशन एस्केप ...
6 वर्ष को उमेर देखि बच्चाहरु को लागी डिजाइन गरिएको खेल। यसमा कठिनाईको3स्तरहरू छन्, र रूलेट पाङ्ग्राहरू, कुञ्जीहरू, कार्डहरू, पिंजरा, टाइमर, परीक्षण डिकोडर, इत्यादिको श्रृंखला। कुञ्जी, रणनीति क्विज मास्टर, भाग्यको पाङ्ग्रा, इत्यादिको कौशल चुनौतीहरू अन्तर्क्रिया र समाधान गर्न सबै कुरा।
अपरेशन एस्केप कोठा किन्नुहोस्
एस्केप रूम द गेम २
Diset- एस्केप कोठा द ...
16 वर्ष देखि सबै उमेरका लागि एस्केप कोठा बोर्ड खेल। यो 1 खेलाडी वा2खेलाडीहरूको लागि हुन सक्छ, र उद्देश्य साहसिक र पजलहरू, हाइरोग्लिफ्स, पहेलियाँ, सुडोकस, क्रसवर्ड्स, आदि को एक श्रृंखला को हल गर्न को लागी हुनेछ। कोनसँग २ फरक ६० मिनेटको साहसिक कार्यहरू छन्: जेल आइल्याण्ड र एसाइलम, र थप १५ मिनेटको साहसिक किडन्याप भनिन्छ।
बाहिर निस्कनुहोस्: डुबेको खजाना
Devir - बाहिर निस्कनुहोस्: खजाना ...
एस्केप रुम बोर्ड गेम जसमा १० वर्ष उमेरका र १ देखि ४ खेलाडीहरू सबैले भाग लिन सक्छन्। सान्ता मारियामा समुद्रको गहिराइमा डुबेको ठूलो खजाना फेला पार्नको लागि एक शानदार यात्रामा आफूलाई डुबाउने उद्देश्य हो।
डूबिएको खजाना किन्नुहोस्
अनलक! वीर साहसिक
अनलक गर्नुहोस्! वीर साहसिक...
यस एस्केप रुम प्रकारको खेलले १ देखि ६ खेलाडीसम्म खेल्ने सम्भावना भएको र १० वर्षका सबैका लागि उपयुक्त कार्ड गेम प्रस्तुत गर्दछ। यो खेल हल गर्न अनुमानित अवधि लगभग 1 घण्टा छ। एउटा साहसिक कार्य जसमा सहयोग र भाग्ने कुञ्जी हुनेछ, पजलहरू, डिसिफर कोडहरू, आदि समाधान गर्न।
Heroic Adventures किन्नुहोस्
Diset - एस्केप कोठा द ...
यो एस्केप रूम बोर्ड गेमले4फरक साहसिक कार्यहरू समावेश गर्दछ जुन 1 घण्टा भन्दा कममा समाधान गर्न सकिन्छ। पहेलियाँ, चित्रलिपि, पहेलियाँ, सुडोकस, क्रसवर्ड्स, आदि संग। कठिनाईको विभिन्न स्तरहरू र3वर्षको उमेरदेखि5देखि 16 व्यक्तिहरूबाट खेल्ने सम्भावनाको साथ। समावेश परिदृश्यहरूको लागि: जेल ब्रेक, भाइरस, आणविक काउन्टडाउन, र एजटेक मन्दिर।
एस्केप कोठा खेल आतंक
Diset- एस्केप कोठा दुई ...
16s भन्दा बढी र2खेलाडीहरूको लागि खेलहरूको यो श्रृंखलाको अर्को संस्करण। चुनौतीहरू, माथिको जस्तै, 60 मिनेट भन्दा कममा समाधान गर्न सकिन्छ। र यस अवस्थामा,2सम्भावित डरलाग्दा-थीम्ड साहसिक कार्यहरू समावेश छन्: लेक हाउस, र सानो केटी। हिम्मत गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा चाखलाग्दो प्याकहरू मध्ये अर्को,3वर्षको उमेरबाट5देखि 16 व्यक्तिहरूबाट खेल्ने सम्भावनाको साथ। यसमा41-घण्टाका साहसिक कार्यहरूका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू समावेश छन्: जोम्बिजको ​​बिहान, टाइटानिकमा आतंक, एलिस इन वन्डरल्याण्ड, र अर्को आयाम। तपाईं तिनीहरूको नामबाट अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न विषयवस्तुहरूको।
यदि तपाइँ यी प्रकारका खेलहरूसँग थप सामग्री खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यहाँ3घण्टा भन्दा कमको 1 अन्य नयाँ साहसिक कार्यहरू छन्। चुनौतीहरूको एक भीड र कठिनाई को विभिन्न स्तर संग। यस अवस्थामा, समावेश गरिएका परिदृश्यहरू हुन्: जादुई बाँदर, स्नेक स्टिङ, र मून पोर्टल। यो 3-5 व्यक्ति र +16 वर्षको लागि पनि उपयुक्त छ। सबै सँगै रमाइलो गर्नको लागि पारिवारिक संस्करण।
एक एस्केप कोठा प्रकार खेल 10 वर्ष को उमेर देखि बच्चाहरु को लागि डिजाइन। यो धेरै पटक खेल्न सकिन्छ, र यो सधैं आश्चर्य छ। कुञ्जीहरू प्राप्त गर्न र बाँकी भन्दा पहिले कोठाबाट भाग्ने प्रयास गर्न धेरै प्रश्नहरू र पहेलियोंको साथ। यसमा 500 भन्दा बढी प्रश्नहरू छन्: 125 पहेलियाँ, 125 सामान्य ज्ञान, 100 पहेलियाँ, 50 गणित समस्या, 50 पार्श्व सोच र 50 दृश्य चुनौतीहरू।
एस्केप पार्टी किन्नुहोस्
La casa de papel - एस्केप गेम
लारोसे-द हाउस अफ...
यदि तपाइँ नेटफ्लिक्स, La casa de papel, Escape Room मा विजयी हुने स्पेनिश शृङ्खलाहरू मनपर्छ भने पनि खेलिएको छ। यसमा तपाईं म्याड्रिडको राष्ट्रिय टकसाल र टिकट कारखानामा शताब्दीको डकैती गर्न छानिएका मध्ये एक हुन सक्नुहुन्छ। लुट प्राप्त गर्न पछ्याउने योजनाको सबै पात्रहरू र चरणहरू।
कागज घर किन्नुहोस्
एस्केप द रुम: वेधशाला हवेलीमा रहस्य
ThinkFun 76368, Exhaust...
यस शृङ्खलाको यो अर्को खेलले १० वर्षभन्दा बढी उमेरका ८ खेलाडीहरूलाई भाग लिन अनुमति दिन्छ। यहाँ खेलाडीहरूले यस रहस्यमय हवेलीको कोठाहरूबाट एउटा रहस्य, त्यहाँ काम गर्ने एक खगोलविद्को बेपत्ताको समाधान गर्न उद्यम गर्नेछन्।
पर्यवेक्षक हवेलीमा रहस्य किन्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस्: परित्याग गरिएको केबिन
Devir - बाहिर निस्कनुहोस्: झोपडी ...
यस खेलको लागि सेटिङ एक परित्याग गरिएको केबिन हो, नामले सुझाव दिन्छ। सबै रहस्यले घेरिएको छ। उन्नत कठिनाईको रमाइलो एस्केप कोठा बोर्ड खेल। 12 वर्ष र माथिका लागि, र एक्लै वा6खेलाडीहरू सम्म खेल्ने सम्भावनाको साथ। यसलाई समाधान गर्न ४५ देखि ९० मिनेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
परित्याग गरिएको केबिन किन्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस्: डरलाग्दो मेला
देवीर - बाहिर निस्कनुहोस्: मेला ...
उही अघिल्लो शृङ्खलाबाट, तपाईंसँग डरलाग्दो मेलामा आधारित यो अर्को एस्केप कोठा पनि छ, जो डराउने शैली मन पराउँछन्। यो 10 वर्षको उमेरदेखि र 1 देखि5खेलाडीहरूसँग खेल्न सकिन्छ। यो सजिलो छैन, र यसलाई समाधान गर्न 45 र 90 मिनेट लाग्न सक्छ।
डरलाग्दो मेला किन्नुहोस्
लुकेका खेलहरू: 1st केस - Quintana de la Matanza को अपराध
लुकेका खेल दृश्य बाट ...
यस हिडन गेम्स श्रृंखलाका धेरै केसहरू छन्, जसमध्ये एउटा स्पेनिशमा अनुवाद गरिएको यो पहिलो केस हो। यस मामला मा एक अन्वेषक जस्तै महसुस गर्नुहोस्। एउटा फरक खेल, नयाँ अवधारणाको साथ जसले यसलाई अझ यथार्थवादी बनाउँछ। यसमा तपाईंले प्रमाणका कागजातहरू जाँच्नुपर्छ, अलिबिस प्रमाणित गर्नुपर्छ, र हत्यारालाई अनमास्क गर्नुपर्छ। तिनीहरूले 1 वर्ष भन्दा माथिका6देखि 14 खेलाडीहरू खेल्न सक्छन्, र यसलाई समाधान गर्न 1 घण्टा र आधा र2र आधा घण्टा लाग्न सक्छ।
पहिलो केस किन्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस्: ओरिएन्ट एक्सप्रेसमा मृत्यु
देवीर - बाहिर निस्कनुहोस्: मृत्युमा ...
उपन्यास र चलचित्रहरू यस क्लासिक शीर्षकको वरिपरि बनेका छन्। अब यो एस्केप रूम बोर्ड गेम पनि आउँछ जसमा 1 र माथिका4देखि 12 खेलाडीहरूले भाग लिन सक्छन्। विधा एक रहस्य हो, र सेटिंग पौराणिक ट्रेन हो, जसमा एक हत्या गरिएको छ र तपाईंले केस समाधान गर्नुपर्छ।
ओरिएन्ट एक्सप्रेस मा मृत्यु किन्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस्: सिनिस्टर हवेली
देवीर- निकास ११, द...
निकास श्रृंखलामा थप्नको लागि अझै अर्को शीर्षक। 10 वर्ष भन्दा पुरानो र 1-4 खेलाडीहरूको लागि डिजाइन गरिएको, 45 देखि 90 मिनेट पछि चुनौतीहरू समाधान गर्ने सम्भावनाको साथ। कथा छिमेकको पुरानो हवेलीमा आधारित छ। एक रन-डाउन, रहस्यमय र एक्लो ठाउँ जुन परित्याग गरिएको थियो। एक दिन तपाईंले आफ्नो मेलबक्समा एउटा नोट प्राप्त गर्नुहुन्छ जहाँ तपाईं आफ्ना साथीहरूलाई भेट्नुहुन्छ, त्यहाँ जान भन्नुभएको थियो। भव्य आन्तरिक र राम्रोसँग संरक्षित सजावट अचम्मको छ। तर अचानक ढोका बन्द हुन्छ र नोटको अर्थ पत्ता लगाउने प्रयास गर्न बाँकी रहन्छ।
सिनिस्टर हवेली किन्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस्: रहस्यमय संग्रहालय
डेभिर - निकास 10, संग्रहालय ...
यो एस्केप कोठाले तपाईंलाई संग्रहालयमा लैजान्छ जहाँ तपाईं कला, मूर्तिकला, मूर्तिहरू, अवशेषहरू, आदि कुनै पनि अन्य संग्रहालय जस्तै फेला पार्ने आशा गर्नुहुन्छ। तर यस संग्रहालयमा जस्तो देखिन्छ जस्तो केहि पनि छैन, र तपाईंले यस रहस्यमय भवनमा फसेको हुनाले भाग्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ।
रहस्यमय संग्रहालय किन्नुहोस्
लुकेका खेलहरू: दोस्रो केस - स्कार्लेट डायडेम
पहिलो केस जस्तै, तर यस मामला मा तपाईं एक धनी परिवार को एक विरासत को चोरी मा एक अनुसन्धान मा प्राप्त। यो ग्रेटर बोर्सटेलहेम संग्रहालयबाट चोरी भएको थियो र लेखकले रहस्यमय सन्देश छोडे। आयुक्तको जुत्तामा जानुहोस् र यस चोरीको लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरू फेला पार्नुहोस्।
दोस्रो केस किन्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस्: फिरऊनको चिहान
Devir - बाहिर निस्कनुहोस्: चिहान ...
यो खेलले 1 र माथि उमेरका6देखि 12 खेलाडीहरूलाई अनुमति दिन्छ। यो विशेष गरी इजिप्टको साहसिक र इतिहास मन पराउनेहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। कथा बिदाका लागि इजिप्टको यात्रामा आधारित छ, जहाँ तपाइँ सबै प्रकारका अचम्मका ठाउँहरू भ्रमण गर्नुहुन्छ, जस्तै टुतानखामुनको चिहान, रहस्य र लगभग जादुईले घेरिएको ठाउँ। जब तपाईं यसको अँध्यारो र चिसो भूलभुलैयामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, ढुङ्गाको ढोका बन्द हुन्छ, र तपाईं फसेका हुनुहुन्छ। के तपाईं बाहिर निस्कन सक्षम हुनुहुनेछ?
फिरऊनको चिहान किन्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस्: गोप्य प्रयोगशाला
Devir - बाहिर निस्कनुहोस्: The ...
यो अर्को शीर्षकले तपाईंलाई एउटा कथामा लैजान्छ जसमा तपाईं र तपाईंका साथीहरूले क्लिनिकल परीक्षणमा भाग लिने निर्णय गर्नुहुन्छ। एक पटक प्रयोगशालामा, ठाउँ खाली देखिन्छ, र त्यहाँ रहस्यको वातावरण छ। टेस्ट ट्युबबाट ग्यास निस्कन थाल्छ र तपाईंले बेहोस नभएसम्म चक्कर लाग्न थाल्छ। एकचोटि तपाईंले होश प्राप्त गर्नुभयो, तपाईंले देख्नुहुन्छ कि प्रयोगशालाको ढोका बन्द छ र तपाईंलाई फसेको छ। अब तपाईं बाहिर निस्कन पहेलियाँ समाधान गर्नुपर्छ ...
गोप्य प्रयोगशाला किन्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस्: मिसिसिपीमा डकैती
Devir- 14 खेल बाहिर निस्कनुहोस्, ...
अर्को उन्नत स्तरको खेल, सबैभन्दा व्यावसायिक एस्केप कोठाहरूको लागि। यो एक्लै वा4खेलाडी सम्म खेल्न सकिन्छ, 12 वर्ष भन्दा बढी उमेरका साथ। एउटा पुरानो शीर्षक, प्रसिद्ध स्टीमबोटहरूमा सेट गरिएको, र बीचमा लुटपाटको साथ। ओरिएन्ट एक्सप्रेसको लागि उत्कृष्ट विकल्प वा पूरक।
मिसिसिपीमा डकैती किन्नुहोस्
एस्केप कोठा द खेल: समय यात्रा
Diset- बोर्ड गेम...
यो एस्केप रुम बोर्ड गेम १० वर्षदेखि सबै उमेरका लागि हो, र ३ देखि ५ खेलाडीहरूद्वारा खेल्न सकिन्छ। पहेलियाँ, चित्रलिपि, सुडोकस, क्रसवर्ड, पहेलियाँ, इत्यादिले भरिएको शीर्षक, जसलाई १ घण्टा भन्दा कममा समाधान गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा, यो समय यात्रामा केन्द्रित 10 नयाँ विषयगत साहसिक कार्यहरूको साथ आउँछ: अतीत, वर्तमान र भविष्य।
समय यात्रा किन्नुहोस्
Asmodee- कोठा 25, ...
13 वर्ष पुराना खेलाडीहरु को लागी एक शीर्षक। विज्ञान कथामा आधारित सम्पूर्ण साहसिक, निकट भविष्यमा जहाँ कोठा 25 नामक रियालिटी शो छ र जहाँ दर्शकहरू प्राप्त गर्न प्रयास गर्न निश्चित रातो रेखाहरू पार गरिन्छ। उम्मेदवारहरूलाई 25-कोठाको कम्प्लेक्समा खतरनाक र अप्रत्याशित प्रभावहरूको साथ बन्द गरिनेछ जसले तिनीहरूलाई परीक्षामा राख्नेछ। र, भाग्नलाई जटिल बनाउन, कहिलेकाहीँ त्यहाँ कैदीहरू बीच गार्डहरू संलग्न हुन्छन् ...
कोठा 25 किन्नुहोस्
बाहिर निस्कनुहोस्: बिर्सिएको टापु
डेभिर - बाहिर निस्कनुहोस्: टापु ...
यो एक्जिट श्रृंखलाको अर्को ठूलो योगदान हो। 12 वर्ष भन्दा पुरानो र 1 देखि4खेलाडीहरु सम्म खेल्ने सम्भावना संग एस्केप कोठा शैली साहसिक। चुनौती लगभग 45 देखि 90 मिनेटमा हल गर्न सकिन्छ। यस खेलमा तपाईं एउटा टापुमा हुनुहुन्छ जहाँ स्वर्गको सानो ठाउँ छ, तर जब तपाईंले यो धेरै ढिलो भएको महसुस गर्नुहुन्छ र तपाईंले पुरानो जंजीर डु boat्गामा भाग्नुपर्नेछ जुन छोड्नुपर्नेछ ...
बिर्सिएको टापु किन्नुहोस्
उत्तम एस्केप कोठा खेल कसरी छनौट गर्ने
समयमा एस्केप कोठा बोर्ड खेल छनौट गर्नुहोस्, यो धेरै सुविधाहरू हेर्न महत्त्वपूर्ण छ, अन्य खेलहरू जस्तै:
न्यूनतम उमेर र कठिनाई स्तर: टेबल गेमको न्युनतम उमेर अवलोकन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ ताकि सबै खेलाडीहरू जसको लागि यो अभिप्रेत छ सहभागी हुन सकून्। थप रूपमा, कठिनाईको स्तर पनि निर्णायक छ, न केवल सानाहरूले भाग लिन सक्छन्, तर वयस्कहरूको क्षमतामा पनि निर्भर गर्दछ। हुनसक्छ यो केहि हदसम्म सरल शीर्षकहरूबाट सुरु गर्न र बिस्तारै थप जटिलहरू प्राप्त गर्न सल्लाह दिइन्छ।
खेलाडीहरूको संख्या: निस्सन्देह, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाइँ एक्लै खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ, जोडीको रूपमा, वा यदि तपाइँलाई एस्केप रूम बोर्ड खेल चाहिन्छ जहाँ तपाइँ ठूला समूहहरू समावेश गर्न सक्नुहुन्छ।
विषयगत: यो फेरि विशुद्ध व्यक्तिगत कुरा हुन्छ, यो स्वादको कुरा हो। कोही डरलाग्दो वा डरलाग्दो विषयवस्तुहरू रुचाउँछन्, अरूले विज्ञान कथा, सायद तिनीहरूका प्रशंसकहरू चलचित्रमा सेट गर्नुहोस्, आदि। मनमा राख्नुहोस् कि यद्यपि तिनीहरूले वास्तविक एस्केप कोठाहरूको अनुभव पुन: सिर्जना गर्ने प्रयास गर्छन्, यी बोर्ड खेलहरू मध्ये केहीमा गतिशीलता परिवर्तन हुन सक्छ।
यसबाहेक, यसको केही विवरणहरू जान्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ निर्माताहरू यी खेलहरू मध्ये, र प्रत्येकले कुन कुरामा विशेषज्ञता प्राप्त गरेको छ भनेर पत्ता लगाउनुहोस्, कुनलाई तपाइँको आवश्यकता वा स्वाद अनुसार राम्रोसँग अनुकूलन गर्न सकिन्छ:
UNLOCK: यो बोर्ड गेम ब्रान्डले वास्तविक एस्केप कोठा जस्तै अनुभव सिर्जना गर्ने बारे सोच्दै यसको शीर्षकहरू डिजाइन गरेको छ, कोठाहरू एकदम यथार्थवादी रूपमा पुन: सिर्जना गरिएको छ।
निकास- यो अन्य ब्रान्डले समाधान गर्न आवश्यक मानसिक चुनौतीहरू, पजलहरू र सुडोकहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ, र तिनीहरूलाई स्तरहरू (सुरुवात, मध्यवर्ती र उन्नत) मा विभाजन गरेको छ।
एस्केप कोठा द खेल: यो शृङ्खला एउटा राम्रो वातावरण र विसर्जन प्रदान गर्ने एउटा हो, खेलहरू जुन दृश्य पक्ष, सामग्री, र मोबाइल एपहरूमा पनि ध्वनि वा पृष्ठभूमि संगीत राख्नको लागि धेरै विस्तृत छन्।
खेलहरू लुकाउनुहोस्: यो प्रहरी विधा र अपराधशास्त्रलाई बढी मन पराउनेहरूलाई लक्षित गरिएको हो। तिनीहरू कार्डबोर्डको खाममा आउँछन् मानौं तिनीहरू एक वास्तविक हत्याको केस हुन्, आदि, र जहाँ तपाईंले अनुसन्धान गर्न र के भयो भनेर पत्ता लगाउन आवश्यक पर्ने सबै कुरा प्राप्त गर्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मलाई फुर्सद दिनुहोस् » सामान्य » सबै भन्दा राम्रो एस्केप कोठा बोर्ड खेल
सबै भन्दा राम्रो भूमिका खेल्ने बोर्ड खेल